Otu esi eme ma ọ bụrụ na enwere mmiri mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu esi eme ma ọ bụrụ na mmiri sie ike
Sergio Gallego | | Climatology, Ihe gbasara ihu igwe
Mgbanwe ihu igwe ọ na-amalite inwe nsonaazụ na-emebi ihe n'ọtụtụ akụkụ ụwa. N'ihe banyere Spain, ọnwa July Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị ewu ewu na akụkọ ntolite niile na ọnwa Septemba ọ malitelarị oké ifufe, akụ́ mmiri igwe na mmiri iyi.
N'okwu nke idei mmiri na olulu mmiri, ị ga-akpachara anya ma soro a usoro nke Atụmatụ iji zere ọdachi.
Ihe kachasị mkpa ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị tọrọ atọ n’ime ide mmiri, bụ iji nwayọ ma ghara ịla n'iyi akwara. Na agbanyeghị gbalịa gafee ụzọ idei mmiri juru ebe ọ bụ na mmiri na-agagharị na oke ọsọ na ị maghị ihe mgbochi nwere ike ịbụ na ala ya. Ọ bụrụ na mmiri ahụ awụwo gị anya wee malite ịdọrọ ụgbọ ala gị, Way ga-apụrịrị n'ụgbọ ahụ n'ụzọ ọ bụla.
Ike nke mmiri na nsị mmiri nwere ike ịkpata ụgbọ ala gị sinks gị na ime Iji pụọ n'ụgbọala ahụ, gbalịa ime ya mbụ Site n'ọnụ ụzọ ma ọ bụrụ na ịdị elu nke mmiri na-ahapụ gị ka ị mee ya. Ọ dị mkpa ka ị cheta, na ị ga-emerịrị ya site n'ọnụ ụzọ ámá ndị dị n'akụkụ nke ọzọ nke ụzọ dị ugbu a. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, nhọrọ ọzọ bụ ịpụ site na windo ụgbọala. Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeghe ya, jiri ya mebie ya ụdị nkọ ihe kpachara anya ka ị ghara imerụ gị ahụ.
Nhọrọ nke atọ bụ ịhapụ site na windo windo, ime nke a, jisie ike na ụkwụ abụọ ruo mgbe iko ga-agbaji kpamkpam. Dị ka a ikpeazụ n'ọnụ na ị na-ekwesịghị ichefu, na-echeta na-jụụ na obi iru ala karia ihe nile, pụta n'akụkụ ọzọ nke ugbu a ma mee ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Otu esi eme ma ọ bụrụ na mmiri sie ike
5 egwu F5 tonado formations
Ifufe Atọ Atọ Atọ kụrụ Oke Osimiri Pasifik n'otu oge
Hụ nhọrọ anyị na mbelata kacha mma